Iimagnethi zeNeodymium (ekwabizwa ngokuba "NdFeB", "Neo" okanye "NIB" iimagnethiAmandla omazibuthe anamandla anamandla enziwe nge-neodymium, i-iron kunye ne-boron alloys. Ziyinxalenye yothotho lwemagnethi olunqabileyo lomhlaba kwaye baneempawu eziphezulu kakhulu zazo zonke iimagnethi ezisisigxina. Ngenxa yamandla amakhulu ombane kunye neendleko eziphantsi kakhulu, lukhetho lokuqala kubasebenzisi abaninzi, kwezentengiso, kwezamashishini nakwizicelo zobugcisa.
Iimagnethi zeNeodymium zithathwa njengezomeleleyo ngenxa yemagnetization yazo ephezulu kunye nokuchasana nedemagnetization. Nangona zibiza kakhulu kuneemagnethi zeceramic, iimagnethi ezinamandla ze-neodymium zinempembelelo enamandla! Isibonelelo esikhulu kukuba ungasebenzisa ubungakanani obuncinciNdFeB iimagnethiukufezekisa injongo efanayo njengamakhulu, oomazibuthe abancinci. Kuba ubungakanani besixhobo sonke buya kuncitshiswa, kunokukhokelela ekunciphiseni indleko zizonke.
Ukuba iipropathi ezibonakalayo zemagneti ye-neodymium zihlala zingatshintshi kwaye azichaphazeli idemagnetization (enje ngobushushu obuphezulu, ukubuyisela umva umazibuthe, imitha, njl.njl.
Iimagnethi zeNeodymium zichaphazeleka kancinci kukuqhekeka kunye nokuchithwa kunezinye izinto ezinqabileyo zemagnethi yomhlaba (ezinje nge I-cobalt (iSmCo)), kwaye iindleko nazo ziphantsi. Nangona kunjalo, banobuthathaka ngakumbi kubushushu. Ukusetyenziswa okubalulekileyo, i-S cobalt inokuba lukhetho olungcono kuba iipropathi zayo zemagneti zizinzile kumaqondo obushushu aphezulu.
N30, N35, N38, N40, N42, N48, N50 kunye no-N52 amabakala anokusetyenziselwa iimagnethi zeNdFeB zazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Sigcina oomazibuthe kwidiski, intonga, ibhloko, intonga kunye neemilo zeringi. Ayizizo zonke iimagnethi ze-neodymium ezibonisiweyo kule webhusayithi, ke ukuba awuyifumani into oyifunayo, nceda unxibelelane nathi.